KStars 3.2.3, yazvino kugadzirisa yeiyo 3.2 nhepfenyuro yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
KStars 3.2.3, yazvino kugadzirisa yeiyo 3.2 nhepfenyuro yave kuwanikwa
Asingasviki mavhiki matatu mushure kusunungurwa kwakapfuura, Jason Mutlaq nhasi afara kuzivisa iyo KStars 3.2.3 kuburitswa. Ichi chiitiko chidiki uye Mutlaq anoratidza kuti chingave chekupedzisira kugadzirisa muKStars 3.2.x dzakateedzana. Se "spot" inogadziridza (yechitatu), shanduko zhinji dzinouya neshanduro iyi nyowani zvigadziriso zvakawanikwa mushanduro dzakapfuura dzeyakakurumbira nharaunda yenharaunda.
Iyo vhezheni itsva yatove kuwanikwa muMutlaq repository, asi haisati yasvika kune APT zvinyorwa kana iyo Snap Store. Muchokwadi, shanduro dzichangoburwa ndedze 3.2.0 uye 3.1.1 zvichiteerana. Kana ndichitarisa mavhezheni aripo, ndinorangarira zvakare vimbiso yekuti iwo mapakeji eSnap achagadziriswa munguva pfupi, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chiri mune ramangwana asi chisingawanzo kuitika panguva ino.
KStars 3.2.3 inowedzera shanduko dzakakumbirwa nevashandisi
KStars 3.2.3 zvakare akawedzera zvimwe zvinhu zvakakumbirwa nenharaunda yevashandisi. Iye zvino iyo Sky Mepu chitambi inogona kugadziridzwa. Default X inogona kuve museve kana denderedzwa. Kuti tichinje chiratidzo che pointer, tinofanirwa kuenda ku Gadzira KStars / Yepamberi / Chitarisiko. Uyezve, ikozvino tIzvo zvakare zvinokwanisika kudzvanya bhatani rekuruboshwe uye rinobva rangobaya kune chinhu chiri pasi pechikara Hunhu hwekuita ndewe kubaya-baya chinhu kuti chiunze mukutarisa, asi kana "Kuruboshwe-tinya" ukasarudzwa, chero kuruboshwe-kubaya kunokwenya kuchinhu ipapo ipapo.
Imwe shanduko diki yave yekuisa zita rezita rakananga muzita rehwindo reEkos, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuyeuka kuti ndeapi maficha atiri kuita. KStars 3.2.3 inouyawo ne kushomeka kwekushongedza kwema icon.
KStars iri inowanikwa yeLinux, Windows, macOS uye kune lite vhezheni ye Android. Vashandisi veLinux vanogona kuisa yazvino vhezheni nekuvhura iyo terminal uye typing iyi mirairo:
Sezvatinoona pane yayo yekurodha peji, imwe sarudzo ndeyekuisa iyo vhezheni iriko inowanikwa kubva kune software centre, asi zvichiri kutora mazuva akati wandei kuti zvionekwe mumahofisi epamutemo. Uchamirira kana kuisa yazvino vhezheni nhasi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » KStars 3.2.3, yazvino kugadzirisa yeiyo 3.2 nhepfenyuro yave kuwanikwa
Antergos yatove nemutsivi. Ichadaidzwa kuti Edza
Dell anotangisa mabhuku matatu matsva ane Ubuntu